Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 27/09/2020)
Ndiyo nguva kuenda koshitomu kunotenga. Ndiani asingadi kuva rokwe kumusoro? Wokugadzira iri nani kusiyana carnivals Brazilian. Funga zvimwe "Prussian Musoja" rinorema dose kuti maumbirwe uye sequins!
For balls nezvimwe indoor zviitiko, matete zvokupfeka vari inokurudzirwa. Kana uchida zvechokwadi ruzivo mutambo uyu, ipapo unofanira kuenda panze! Chingorangarirai kupfeka chinhu inodziya pasi! The real Cologne carnival fan is not put off by the mamiriro okunze! Vaenzi vaya kusvika yapera achawana Masiki, zvokupfeka, uye kuita-up dzakawanda muzvitoro pakati peguta. Sechinhu chokupedzisira, nyore dzvuku bepa mhino ndiko zvose zvaunoda. Want vamwe pfeka Info.
Shoko iri rinoreva Vapar, nembariro kana mumaresitorendi. Vanenge vose kutora chikamu mune vachipemberera Cologne Carnival. Ivo kubvisa fanicha kuumba hombe kutamba uriri nokushongedza zvose rina mavara mavara kwemazuva kupemberera zvitanhatu panhurikidzwa. In Pubs dzakawanda dzomunharaunda, chete Kölsche mumhanzi iri kuridzwa (nziyo Kölsch bazi remutauro). Uchakurumidza vanowanzozviwana kusvika 300-mita refu pamwe nekurutsa pamberi chinyakare Pubs.
mu 1824 muna Beuel, chikamu Bonn, boka pesin vakadzi vakaumba Karneval komiti yavo. Zvinoita sokuti vakanga vaneta pakuita mbatya apo munhu wose aiva vachipemberera Karneval. Ivo yaaigara ari Town Hall akatora pamusoro hurumende guta. (Zvino rangarirai ... Karneval ndiyo nguva apo vakuru vakuru vehurumende vari caricatured pachena, uye hurumende kwokunyepedzera akasarudzwa. nhasi, ichi "storming of Beuel Town Hall" vakadzi anoratidzwa vachiramba vachirarama Terevhizheni. Girl Power!
Mushure Carnival brunch pamwe Kölsch doro, pane kuita panguva bivouac of Carnival nzanga aine uto tsika panguva Neumarkt. In the evening you can go to the Ghost Parade.
On mangwanani, VaKaturike enda kuchechi kugamuchira pamuchinjikwa madota pahuma dzavo sechiratidzo chokupfidza. manheru, zvegore Carnival mwaka iri rakagara richidudzirwa akagumisa panguva chisvusvuro hove.
Have we convinced you to attend Cologne Festival 2019, asi? Anobatirira kwenyu chitima matikiti kubva Sava A Train in minutes with no extra, pesky mari! Which means more money for Weetschaff 🍻
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ane Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcologne-festival%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)